प्रचण्डलाइ आफन्तजनको आक्रोस, छोरो मर्दा साथ नदिने ओलीको पछि किन लाग्नु ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : सोमवार, मंसिर ४, २०७४
भनिन्छ, सम्बन्ध भनेको ज्यूँदाको जन्ती , मर्दाको मलामी हुन् । जन्ती र मलामीमा काम नलागेकाहरु जिन्दगीमा कहिल्यै काम लाग्दैनन् भन्ने नेपाली समुदायमा रही आएको विश्वास हो ।
स्वार्थका भरमा बन्ने र भत्कने सम्बन्धहरु मान्छेका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले यस्तै खतरनाक सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका छन् ।
पुत्रशोकमा रहेका प्रचण्डलाई नेपालका मात्रै होइन विदेशमा समेत रहेका उनका मित्र एवं नेताहरुले सहानुभूति व्यक्त गरे । तर पछिल्लो समय सबैभन्दा हितैषी बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने प्रचण्डले आर्यघाटमा पुत्रलाई दागबत्ती दिइरहँदा पूर्वमा भाषणमा रमाइरहेका थिए ।
झापामा ओली र दाहाल संगै थिए । पुत्र शोकको खबर पाएपछि प्रचण्ड काठमाडौं फर्किए तर ओली संगै फर्किएनन् । प्रचण्डको पुत्र वियोगभन्दा निर्वाचन प्रचार महत्वपूर्ण कहिल्यै हुँदैन । तर ओलीले प्रचण्डलाई काठमाडौं बिदाई गरे र आफू प्रचारमा हिडें ।
प्रचण्डकै प्रतिस्पर्धी राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे समवेदना प्रकट गर्न चितवनबाट चुनावी कार्यक्रम स्थगित गरेर काठमाडौं आए । प्रचण्डले बारम्बार सत्तोसरा गर्ने बाबुराम भट्टराई हतारमा काठमाडौं आए अनि प्रकाशको अन्तिम संस्कारमा सहभागि भए । तर वामगठबन्धनका नाममा प्रचण्डले सबैभन्दा नजिक राखेका ओलीले उनको दुखमा साथ दिने प्रयास समेत गरेनन् ।
ओलीले प्रचण्डलाई काठमाडौं पठाएर आफू एक्लै भाषणमा रमाएका मात्रै होइनन । गठबन्धनका महत्वपूर्ण नेता शोकमा रहेको बेला उच्च बाँध निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने भने र विवादित वक्तव्य समेत दिए ।
यस घटनाबाट प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्धमा तिक्तता आएको बताइएको छ । प्रचण्डलाई उनकै परिवारका आफन्तले ‘छोरो मर्दा साथ नदिने ओलीको पछि किन लाग्नु ?’, भनेका छन् ।